नेपाली राजनीति Archives - Page2of7- Pardeshi Khabar
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: February 6, 2018
माघ २३ ,काठमाडौंl निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा चुनावको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले चुनावका लागि सुरक्षालगायत सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको हो । हरेक प्रदेशबाट ८–८ जनाको दरले ५६ जना राष्ट्रियसभामा चुनिने प्रावधान रहेकोमा २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले अब ३२ जनाका लागि मात्र बुधबार चुनाव हुने आयोगले जनाएको छ । यसका लागि ५२ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् । राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट तीनजना महिला, दलित समुदायबाट एकजना, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकबाट एकजना र अन्य बाट तीनजना सांसद चुनिनेछन् । प्रदेशफुर्सदमा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: February 1, 2018
माघ १८, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भेटवार्ता भएको छ । स्वराजको सम्मानमा एमालेले होटल सोल्टीमा रात्रीभोज राखेको छ । त्यस अघि भेट भएको हो । भेटमा आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री बिहीबार अपराहृन काठमाडौं आएकी हुन् । उनले भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । साभारः अनलाइन खबरबाट
स्वराज आज आउँदै, औपचारिक जानकारी ‘भ्रमणकै दिन’
‘स्वराजको भ्रमणले ओलीलाई दिल्ली होइन, मोदीलाई काठमाडौंको यात्रा तय गर्ने सम्भावना छ’ माघ १८, काठमाडौँ l परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज करिब २५ घण्टे ‘राजनीतिक’ यात्रामा बिहीबार (आज) काठमाडौं ओर्लने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भ्रमण घोषणा गरेको दुई दिनपछि परराष्ट्रले त्यस्तो जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भने मन्त्रालयले बिहीबार (सुष्मा आइपुग्नु केही घण्टाअघि मात्र) भ्रमणको औपचारिक जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय बुधबार मात्रै दुईपक्षीय एजेन्डा र खाका तयार गर्नमा जुटेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार आफैंले सम्हालेकाले सुष्मासँग दुईपक्षीय वार्ता पनि प्रधानमन्त्रीफुर्सदमा
डा. केसीको गिरफ्तारीपछि लहरो तान्दा पहरो थर्केजस्तो, प्रधानन्यायाधीशमाथिनै डा. केसीको ११ वटा सवाल
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: January 10, 2018
पुस २६, काठमाडौं l अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेपछि यसले प्रधानन्यायाधीशकै छवी र कार्यशैलीमाथि प्र्रश्न चिन्ह उब्जेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बयान दिने क्रममा डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि ११ अभियोग लगाएपछि यसले लहरो तान्दा पहरो थर्केजस्तै भएको छ । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको अभियोग सत्य हो कि होइन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो अभियोगलाई न्यायलयले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसअघिका कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि यति ठूलो अभियोग कहिल्यै लागेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशमाथि डा. केसीको अभियोग : मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बयान दिनेफुर्सदमा
नेपाली राजनीति नेपाली खबर, बिशेष समाचार, राजनीति, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: January 2, 2018
पुस १८, काठमाडौँ l सरकारले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भौतिक पूर्वाधारका आधारमा ती अस्थायी मुकामको खाका तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर, प्रदेश नं ३ को भक्तपुरको ठिमी, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को धनगढी अस्थायी मुकामफुर्सदमा
नेपाली राजनीति ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार, मनोरंजन, राजनीति No Comments »
सेप्टेम्बर २६ l पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले पोखराकै अति व्यस्त चोकको रुपमा रहेको लखनचोकमा रहेको नेपालका प्रथम शहीद लखन थापाको शालिक रातारात हटाएपछि आएको चौतर्फी बिरोधपछि तत्स्थानमै शालिक पुनस्थापना हुने भएको छ । शालिक हटाइएपछि आक्रोशित बनेका मगर समुदायलगायत सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यमबाट चौतर्फी चर्को विरोध गरेपछि अन्ततः प्रशासन झुक्न बाध्य भएको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्, कास्कीका अध्यक्ष धर्म गुरुङको विशेष पहलमा भएको वार्ताबाट १० बुँदे सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र नेपाल मगर संघ कास्कीबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति अनुसार मगरफुर्सदमा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: May 5, 2017
वैशाख २१, काठमाणडौ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आगामी वैशाख २५ देखि ३१ गते सम्म निर्वाचन हुने प्रदेशका सबै शैक्षिक संस्थामा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन हुने ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशअन्तरगतका विद्यालयमा ७ दिन विदा दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले विद्यालयमा मतदान केन्द्र रहने भएकाले वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने प्रदेशका सबै विद्यालयहरु २५ गतेदेखि ३१ गते सम्म बिदा दिने सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन प्रभावित नहोस् भनेर मतदानफुर्सदमा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: May 4, 2017
मेयरका महिला उम्मेदवार जम्मा २१ जना वैशाख २१, काठमाडौंl स्थानीय तहसम्वन्धि निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारी दिंदा दलले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेपनि ठूला दलले अधिकांशमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा सीमित गरेका छन् । महिलाको समान हैसियत निर्माण गर्न यो प्रावधान राखिए पनि दलहरूले ‘करकापले अवसर’ दिएजस्तो देखाएका छन् । चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगर र १ सय ८६ गाउँपालिका गरी २ सय ८३ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मंगलवार उम्मेदवारी दिंदा सबैजसो दलले प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उभ्याएका हुन् । ऐनको दफा (४) उपदफा (१) माफुर्सदमा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: April 30, 2017
वैशाख १७, काठमाण्डौ l संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची एकाएक रद्द गर्दै संसदको बैठक पाँच दिनका लागि स्थगित भएको छ । आइतबारको बैठकमा पूर्वसांसद नथुनीसिंह दनुवारको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसद बैठक स्थगित भएको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । पूर्वसांसद दनुवारको ८८ वर्षका उमेरमा यही वैशाख १० गते उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय योद्धा, साहित्यकार एवम् समाजसेवी दनुवार २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा सिरहा क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित थिए । पूर्वसांसदफुर्सदमा
नेपाली राजनीति ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रमुख समाचार, राजनीति No Comments »
मध्यरातमा दर्ता भयो सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाको संशोधन (पूर्ण पाठसहित)
बैशाख १६ , काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संशोधन मध्यरातमा दर्ता भएको छ । संशोधन दर्ताका लागि दिएको समयको अन्तिम दिन अबेर मात्र सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । र, राति अबेर १० बजे मात्र संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ दलले राखेको संशोधन पास भए अब प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति चाहिने छैन, परामर्श मात्र लिइनेछ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, मधेसी मोर्चाले यसलाईफुर्सदमा
नेपाली राजनीति ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रमुख समाचार, मनोरंजन, राजनीति No Comments »